Global Voices teny Malagasy · 3 Novambra 2017
03 Novambra 2017
Tantara tamin'ny 03 Novambra 2017
Azia Atsinanana03 Novambra 2017
Karaiba03 Novambra 2017
Raha "tsy mana-kolazaina" ny ankamaroan'ny olona mba hamaritana ny fahavoazana vokatry ny tondradrano dia niantso ny zava-nitrana ho "kely" ny filoha lefitry ny sampan-draharahan'ny voina ao amin'ny firenena .
Nanaisotra Vetivety Ny Fanabeazana Ara-pananahana i Manila
Nanapa-kevitra hanaisotra ny taranja momba ny fampianarana ara-pananahana ny manampahefana misahana ny fanabeazana ao Filipina rehefa nanohitra ny fampianarana ara-pananahana any an-tsekoly ny Fiangonana Katolika matanjaka.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Novambra 2017
Taorian'ny fitsidihana ny foiben-toeran'ny fampielezankevitr'i Moeen raha mbola teo am-panisàna ny vato, nampita ny fanantenany i Hossein Derakhshan (Hoder) hoe hiatrika fihodinana faharoa i Moeen.
Vaovao Momba Ny Bilaogy Iraniana: Fanivanana, Boky Vaovao sy ny Ramadany
Ny mahatsikaiky amin'ny zava-misy dia nampiasaina hanakatonana ireo bilaogy sy tranonkala Iraniana ny rindrambaiko Amerikana! Milaza ireo orinasa Amerikana fa mampiasa ny rindrambaikon'izy ireo tsy mahazo alalana sady tsy mandoa vola i Iran. Mihevitra angamba ny governemanta Iraniana fa rindrambaiko mitovy karazana amin'ny Linux ny rindrambaiko sivana!!